AMERIKANINA BANDOGGE MASTIFF DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Amerikanina Bandogge Mastiff Dog Fampahalalana sy sary
Andriamatoa Vegas the Bandogge Mastiff tamin'ny faha-4 taonany— 'Andriamatoa Vegas no namako akaiky indrindra. Izy mihitsy no atao hoe American Bandogge: tsy mivadika, mankatò ary miaro an'ireo instisy alika mpiambina ireo. Nahazo ny laharana voalohany tamin'ny kilasy Bully Breed tao amin'ny Bully Palooza Dog Show tamin'ny volana martsa 2012. Namokatra zanaka mahafinaritra izy. Tena reharehantsika izy. Ny santionany dia: milanja hozatra madio 115 pounds sy 21 santimetatra amin'ny malazo. Tena mailaka sy atletika izy. '
American Bulldog x Mastiff = Amerikanina Mastiff
Ny teny hoe 'Bandogge' dia anarana mahazatra ho an'ny karazana Mastiff karazana Bulldog. Ny Bandogge dia manana hozatra tena malaza sy angotra izay manome ny alika fijery mahery sy mailaka. Ny ankabeazany dia brindle mainty fa ny loko hafa dia misy ny mainty, manga, mena ary manidina.
Ny Bandogge dia alika manan-tsaina indrindra. Matoky tena izy ary tena mahomby. Tahaka ny Mastiff rehetra, tokony hanana tompona afaka mijanona izy ireo manjaka amin'ny alika. Matetika izy ireo dia tsy atolotra ho safidy tsara ho an'ny tompona alika voalohany, satria mila olona tena mahatakatra izy ireo voajanahary kaninina ary ahoana no mifampiresaka tsara inona no tadiavinao aminy. Na dia tsy nompiana toy ny alika mpiady aza izy ireo, raha miaraka amina tompony mandalo tsy mahay mifampiresaka herisetra dia tsy ekena, dia mety ho lasa mahery setra. Ny olona sasany, amin'ny ankapobeny ny morontsiraka atsinanana, dia mbola mampiasa ity alika ity ho toy ny alika mpiady. Soa ihany, betsaka kokoa ny olona miteraka alika ireo ho an'ny fiarovana fa tsy amin'ny ady. Amin'ny maha alika mpiaro azy ireo dia iray manontolo izy ireo, tena tsara. Manana fiara mitondra fiara be izy ireo ary azo zahana ihany. Ny hany fihemorana amin'ny asa fiarovana dia ny tsy fahavononany hanao ny ampahany 'hodi-kazo' amin'ilay 'hodi-kazo sy mitazona.' Rehefa tratry ny fitrandrahana ady izy ireo, ny ankamaroan'ny alika amin'ity tsipika ity dia tsy mivily ho fampitandremana fa mazàna asa sarotra io. Ny American Bandogge dia karazany tia fifantohana ary miroborobo amin'ny fitarihana. Raha tsy mpitarika alika 100% an'ity alika ity ianao ary / na raha tsy manome ampy ianao fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana ho lasa tena izy sosotra rehefa avela irery ary ho sarotra fehezina. Na dia faly aza izy ireo manintona ary mandray an-kafaliana izay omenao azy ireo, dia tena mila tompona mampiseho fahefana amin'izy ireo izy ireo. Aleon'izy ireo miaraka amin'ny tompony ary miaina mampifaly sy miaro azy ireo, tia ny fianakaviany ary miaro ny faritra misy azy ireo. Ny bandogges dia afaka mifanaraka amin'ny biby hafa raha notezaina niaraka tamin'izy ireo, anisan'izany ny saka, saka ary alika hafa, saingy mety ho mahery setra amin'ny biby mbola tsy fanaony ifaneraserana miaraka amin'i. Hiaro ny tenany sy ny fianakaviany hatramin'ny farany izy ireo. Matoky tena sy mankatò azy ireo tsara izy ireo miaraka amin'ny ankizy. Ny bandogges dia toa manana fahatsapana rehefa tokony halemy fanahy. Izy ireo dia mpianakavy tsara ary koa an mpiditra an-tsokosoko nofy ratsy ratsy indrindra. Voalaza fa izy ireo no 'The Silent Peacekeepers.' Ity karazana ity dia mety hilentika sy slobber.
Milanja: Lehilahy 100 -140 pounds (45 - 63 kg)
Milanja: 38 kg eo ho eo ny vehivavy ary miakatra.
Haavony: Ny lahy 25 - 29 santimetatra (63 - 73 cm) mazàna dia kely kokoa ny vehivavy.
Bandogges dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Tsy miasa intsony izy ireo ao anaty trano ary hisy tokontany kely. Ity karazana ity dia tia miaraka amin'ny tompony ary tsy mankafy ny fiainana ao anaty trano kennel.
Mila fanatanjahan-tena be dia be ny American Bandogges.
Manodidina ny 10 taona.
Ireo alika goavambe sy lava volo ireo dia mora karakaraina. Esory amin'ny volo vita amin'ny goma ny volo maty sy volo. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny American Bandogges dia tsy alika madio amin'ny fomba ahalalantsika ilay teny hoe 'madio'. Ny razamben'izy ireo dia American Pit Bull Terrier SY Neapolitan Mastiff . Misy kennel sasany izay mamokatra Bandogges am-pahombiazana amin'ny taranaka maro, nefa tsy manampy rà avy amin'ny karazany hafa, ary nahazo karazana homogeneous. Tamin'ny faran'ny 1960 dia mpitsabo biby iray antsoina hoe Swinford no nanomboka programa fitomboana izay namokatra alika mpiaro lehibe indrindra. Na dia tsy mitovy hevitra amin'ireo mpiompy ao Bandogges ankehitriny aza ny amin'izay karazana teti-dratsy tany Swinford, dia ny marimaritra iraisana fa 50% Amerikanina Pit Bull Terrier ary 50% lehibe dia lehibe. molosser . Ny fomba fanao mahazatra indrindra hamokarana Bandogge dia ny fiampitana lalao amerikana pit Bull Terrier amerikana miaraka amina vehivavy Neapolitan Mastiff lehibe sy matanjaka. Fomba iray mahazatra ihany koa ampiasaina amin'ny fiompiana ny Bandogges ny fiampitana an English Mastiff miaraka amin'ny American Pit Bull Terrier . Ny American Canine Hybrid Club dia manaiky ny American Bulldog niampita tamin'ny Mastiff ho American Bandogge. Ny Designer Dogs Kennel Club dia manaiky ny American Bulldog niampita tamin'ny Mastiff amin'ny maha Amerikana Masti-Bull azy. Ary koa, hazo fijaliana mitovy amin'izany dia ny Pit Bull Terrier ary ny Bullmastiff na izany aza, io lakroa io dia tsy antsoina hoe Bandogge, fa Pit Bullmastiff kosa. Ny anarana Bandog dia nampiasain'ny Saksons tany Angletera taloha ary avy amin'ny teny hoe Banda, teny siononina ho an'ny rojo. Fanao mahazatra ny mamatotra ny alika amin'ny andro ary mandefa azy amin'ny alina hahafahany manao ny asany mpiambina.
Araka ny filazan'ny ACHC - American Bulldog x Mastiff = American Bandogge
Araka ny DDKC - American Bulldog x Mastiff = American Masti-Bull
Araka ny IDCR - American Bulldog x Mastiff = MastiBull
Araka ny IDCR - American Pit Bull Terrier x Mastiff = American Bandogge Mastiff
Araka ny lazain'ny DBR - American Bulldog x Mastiff = American Mastiff
'Sary ao amin'ny Savant's Cairo, Bandog 4 taona. Izy dia alika mpiompy alim-pianakaviana goavambe avy any Queensland Australia izay mahay misongadina amin'ny fihazana kisoa sy ny fanatanjahantena fiarovana manokana. Tena famerenana amin'ny laoniny ny Neapolitan Mastiff izy. Mastiff entin'ny remby mihaza tokoa izy, miaraka amin'ny nerveurs mahery sy fiarovan-tena mahery. Alika ara-tsosialy izy, marin-toerana ary tena azo alefa. Mipetraka amin'ny 28.5 'sy 120lbs, dia mahagaga fa haingana sy mailaka amin'ny tongony izy. Mamokatra tsara izy ary izy no fototra lehilahy ao amin'ny SavantK9. ' —Ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny SavantK9
Savant's Cairo the American Bandogge Mastiff amin'ny faha-4 taonany manao fanazaran-tena momba ny fiarovana - Courtesy of SavantK9
Radley the brindle lahy amerikana Bandogge amin'ny ray 12 herinandro dia Mastiff ary renim-pianakaviana Amerikanina Bulldog.
fanjanahana fetra farisianina fetra collie mix
Diesel the American Bandogge amin'ny 2 taona
Andriamatoa Yanyeroo the Olde English Bulldog (Hermes Bloodlines) ary Dogue de Bourdeaux 'French Mastiff' (Riverbend Bloodlines) mifangaro amin'ny 10 volana
Hijery ohatra hafa momba ny American Bandogge Mastiff
American Bandogge Mastiff Sary 1
American Bandogge Mastiff Sary 2
American Bandogge Mastiff Sary 3
amerikana bulldog mix black lab
pitbull sy ny Amerikana bulldog Mix
alika kely nateraka
kilalao manga Aostraliana merle mpiandry ondry
mixer boxer pitbull orona manga